SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Sat, Feb 23rd, 2013 Android Tutorials / Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)
Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..
72 comments on “SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)”	ပြည့်ဖြိုးကျော် on February 23, 2013 at 10:20 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသက်နိုင်စိုးရေ…ရပါတယ် ကျွန်တော် လုပ်ပြီးပြီ… ဒါပေမယ့် အောက်က Youtube link လေးကိုတော့ကြည့်လုပ်ပါ ပိုအဆင်ပြေပါတယ် အင်တာနက်ဖွင့်ထားပြီးလုပ်ရမှာပါ ဒါမှသူ့ ဆာဗာနဲ့ချိတ်မိမှာပါ … Root ပြီးသွားရင် http://www.srsroot.com/ မှာ root လုပ်သူရဲ့ ဖုန်း မော်ဒယ် ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် … ကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေပါတယ် … http://www.youtube.com/watch?v=sTfDUkLDzA4&list=UU7njeypKbpzI2udzqyTgT0w&index=3
Reply ↓	pyi thein on March 2, 2013 at 3:24 pm said:
phone modelက ဘာ လဲဗျ ပြောပြပေးပါလား
Reply ↓	ပြည့်ဖြိုးကျော် on March 22, 2013 at 1:33 pm said:
ဆောရီးဗျ ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ကျွန်တော် root တာက samsung tab 8.9 ပါ သူ့ site မှာလဲ ကို့device မော်ဒယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ Youtube video တွေကိုကိုကြည့်ပြီး root နိုင်ပါတယ်
Reply ↓	nyilinaung on February 23, 2013 at 11:30 pm said:
Myan font HTC j ba lo la
Reply ↓	A Gun on February 24, 2013 at 3:12 am said:
ကိုသက်နိုင်စိုးရေ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါ Acer b1-a71 tablet ဘယ်လိုroot လို့ရမှာလဲမသိလို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပေးပါနော်။
Reply ↓	AH DAY on March 15, 2013 at 3:32 am said:
ကျနော်လဲ Acer b1-a71 tablet root လို့မရသေးဘူး…
Reply ↓	kohtoo on February 24, 2013 at 6:14 am said:
ှSRS One click root ,,,,, version 4.0 >> http://download.unlocksamsungonline.nl/SRSRoot-Setup.exe
Reply ↓	Min Min on February 24, 2013 at 10:04 am said:
Reply ↓	manuhar on February 25, 2013 at 1:03 am said:
ကိုသက်နိူင်စိုးရေ ကျွန်တော့်ရဲ့ Huweiu8825D ကို ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ root လုပ်တာ ဖုန်းကမတက်လာတော့ဘူး welcome screen မှာပဲ ရပ်နေတယ် ခပ်ကြာကြာလေးစောင့်ကြည့်နေလည်း ဘာမှမပြောင်းသွားဘူး၊ ပါဝါလည်း off လို့်မရဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာ ပြန်ပြောပေးစေချင်ပါတယ်၊
Reply ↓	Happy85ster on February 25, 2013 at 5:39 am said:
Auto Root Failed on this device. help me! my phone is 003SH
Reply ↓	yanphyo on February 25, 2013 at 6:40 am said:
ကျွန်တော်ဖုန်းက u8825d ပါ ကုတ်နံပါတ်တောင်းထားတာအခုထိကြမျာသေးလို.အဲဒါဘာလို.ပါလည်းခင်ဗျာ
Reply ↓	khin on March 6, 2013 at 2:56 am said:
Reply ↓	komin on May 1, 2013 at 2:37 am said:
E root tool နဲ. root လိုက် အဆင်ပြေတယ်
Reply ↓	tykoko on May 3, 2013 at 3:05 pm said:
သိပြီးပြိလားတော့မသိဘူး အကိုတို့…စတင်တွေ့ရှိသူ ကိုဌေးလှိုင်ဦး,ကိုမျိုးနဲ့ Myanmar Mobile Forum တို့ပါ….ကုတ်တောင်းစ၇ာ မလိုပါဘုး..လွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျာ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျော်ချင် ခွချင် လို့ မဟုတ်ပါဘုး…
Reply ↓	pyae phyoe aung on February 25, 2013 at 12:58 pm said:
Reply ↓	ကိုသက် on February 26, 2013 at 6:16 am said:
massage ကိုဝင်ပါ massage setting ကိုဝင်ပြီး massage center နံပါတ်ကိုပြင်ပေးပါ။
Reply ↓	pyae phyoe aung on February 26, 2013 at 7:45 am said:
message centar နံပတ် က ဘာ လဲ အကို။ကျေးဇူးပါ ဘဲ ဖြေ ပေးတဲ့အတွက်
Reply ↓	Lin on February 27, 2013 at 6:39 am said:
Reply ↓	yelinnnaing on February 27, 2013 at 3:07 am said:
ဆိုင်မှာသွားဖွင့်လိုက်ပေါ့။အဲဒါ message လိုင်းပိတ်နေတာ ငပေါရဲ့
Reply ↓	pyae phyoe aung on February 27, 2013 at 3:47 am said:
အဲဒါမင်းပြောမှလား ။ ဆိုင် မသွားချင် လို့ဒီမှာမေးနေတာ ငပေါကြီးရဲ့။
Reply ↓	noonsai on February 27, 2013 at 7:32 am said:
ywar tharr on February 28, 2013 at 1:01 pm said:
open ph call keypad
enter phone information mode
refresh smsc box
Reply ↓	komaung on May 17, 2013 at 7:55 pm said:
ကျွန်တော်ရဲ့ Massage လည်းဒီအတိုင်းပဲမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဟန်းစက်ပြောင်းထည့်လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ အားကိုးပါတယ် အစ်ကိုတို့အစ်မတို့ညီလေးတို့ရယ် Handset Model ကတော့ Nokia N8 ပါ
Reply ↓	koungkoung on February 25, 2013 at 4:59 pm said:
အကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက SIGNTECH အမျိုးအစား SGT-A20 ပါ။Sofrware ကိုတော့ downloads ဆွဲပြီးသွားပြီ။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိလို့ပါ။ဖြေပေးပါအုန်း အကိုရေ။
Reply ↓	koungkoung on February 25, 2013 at 5:04 pm said:
အကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက SIGNTECH အမျိုးအစား SGT-A20 ပါ။Software ကိုတော့ downloads ဆွဲပြီးသွားပြီ။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိလို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါ အကိုရေ။
Reply ↓	khin mg htwe on February 26, 2013 at 4:58 pm said:
I’m in China.Most of Myanmars can’t use Myanmar Language on phone.I want to learn how can I do root and to install Myanmar Language into phone.Can U teach me Plz?
Reply ↓	Gz on February 27, 2013 at 3:22 am said:
အကို…. ကျွန်တော်ဖုန်းက samsaung galaxy nexus i9250 ပါ.. v4.1.1 တင်ထားပါတယ်.. .. အဲဒါ root လုပ်ချင်လို့… ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်… ကူညီပါအုံးအကိုရေ…
Reply ↓	JojOe(KOThu) on February 27, 2013 at 5:06 am said:
ဒီဆော့လ်ဝဲသုံးမယ်ဆိုရင်…အင်တာနက်လိုပါ…တယ်…မဟုတ်ရင် Root မပေါက်ပါဘူးး…လုပ်နည်းကတော့မခက်ပါဘူးးးဒေါင်းပီးရင်ကွန်ပြူတာမှာသွင်းးးးဖုန်းကို Usb Debug On ပီးချိတ်…. Permanent root button လေးနှိပ်သူဟာသူလုပ်ပါမယ်…လိုအပ်တာလဲသူစာနဲ့ဖော်ပြညွန်ကြားပါတယ်……အဆင်ပြေပါစေ…ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ထားတာပါ….http://download.unlocksamsungonline.nl/SRSRoot-Setup.exe
Reply ↓	lwanthu on February 27, 2013 at 1:19 pm said:
ကျနော့် ဖုန်းက asus padfone ပါ.. root လုပ်လို့ဘယ်လိုမှ မရလို့ ကူညီပေးပါဦး
Reply ↓	yaungnethit on February 27, 2013 at 5:19 pm said:
Reply ↓	zaylay on February 27, 2013 at 5:31 pm said:
အစ်ကိုကျွန်တော့ဖုန်းက htc a919 ပါ root ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေ
Reply ↓	toonaung on February 27, 2013 at 7:04 pm said:
window8 phone အတွက်မြန်မာဖောင့်ရပြီလား အကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ် NOKIA LUMIA820 ပါ
Reply ↓	pyaephyo on February 27, 2013 at 10:48 pm said:
samsung note GT-7000 XXLSA 4.1.2 root
Reply ↓	khinhlaing on February 28, 2013 at 6:00 am said:
C 8810 srs နဲ့ root လုပ်တာ ADB မရဘူးဘဲပြောနေတယ်
Reply ↓	လမင်း on February 28, 2013 at 11:33 am said:
ကျွန်တော့်ဖုန်းက 8825D ပါ။ auto root failed ဖြစ်နေပါတယ်။ အခေါက်ခေါက်အခါခါလုပ်တာမရပါဘူး။ ကူညီပါဦး။
Reply ↓	myomin on February 28, 2013 at 12:53 pm said:
အစ်ကို sonyericsson ( Xperia Neo MT15i) အတွက် မြန်မာဖောင်.လုပ်နည်းနဲ. ဗားရှင်းမြင်.နည်းလေးသိချင်လို.ပါ
Reply ↓	thanzawhtoo on April 23, 2013 at 5:32 pm said:
Viewsonic viewpad100d root လုပ်မရလို့….ကူညီပါအုံးနော်
Reply ↓	Shineko on February 28, 2013 at 2:53 pm said:
Reply ↓	cosmow on March 9, 2013 at 11:38 am said:
shaume နဲ. root လိုက်ပါ ။ကျွန်တော်စမ်းပြီးပါပြီ
DEMO mobile စမ်းချောင်း ဂွဈေး။
Reply ↓	coolboy on April 20, 2013 at 2:33 pm said:
bro … Telsda m898 can’t root with shuame . help me
Reply ↓	shinegyi on February 28, 2013 at 3:35 pm said:
can this software root for U8950D?
Reply ↓	San Thit Hein on February 28, 2013 at 7:29 pm said:
Reply ↓	aungthiha on March 1, 2013 at 3:04 am said:
ကျွန်တော့်ဖုန်းက Asdend D1 (U 9500)ပါ Root လုပ်ချင်လို့ပါကူညီပါဦး။
Reply ↓	komaung on May 17, 2013 at 7:46 pm said:
go to pansoetan unquite computer service…..root for good..
Reply ↓	thiha on March 1, 2013 at 8:04 am said:
Reply ↓	min soe on March 2, 2013 at 5:53 am said:
bootloader unlockေ၇ာလုပ်ဖို့လိုလား၊ for sony,htc,huawei,
Reply ↓	Judas lay on March 2, 2013 at 6:37 am said:
အကိုရေ ကျနော့်ဖုန်းက Lenovo A789 ကြီးခင်ဗျ။ အဲ့တာလေ ဖုန်းကိုမြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်တာ။ ဆိုင်တွေက လဲ lenovo ဆို သိပ်မလုပ်ရဲဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ အကို့ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့လဲအဆင်ပြေပါ့ မလားမသိဘူး။ စမ်းလည်းမစမ်းရဲဘူး. အကို အ ကြံလေးပေးပါဦး
Reply ↓	skidfloat on March 18, 2013 at 1:00 pm said:
Reply ↓	midnight on March 2, 2013 at 7:10 am said:
It doesn’t work with Samsung Galaxy SII Plus GT-I9105P
Reply ↓	myaw on March 2, 2013 at 9:46 am said:
အကိုတို့ရေ ကျနော်ဖုန်းက OPPO find R8111 Android version 4.0.4 ပါ Root ဖောက်ချင်တယ် ကူညီကြပါဦးဗျာ လိုက်ရှာနေတာရှာမရလို့။
Reply ↓	myaw on March 2, 2013 at 9:52 am said:
အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ Root Toolတွေကိုလဲ လုပ်ကြည့်ပါတယ် လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး ဆိုင်သွားတော့လဲ မရဘူးတဲ့ ဘာညာစသည်တွေပေါ့ ဖုန်းဝယ်ထားတာအလကားဖြစ်သွားတာပေါ့နော် မြန်မာစာကလဲဖတ်မရဘူးလေ ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ် အကိုတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းတွေကိုလဲ ပြောပြပေးစေချင်တယ်။
Reply ↓	Phillip Mars on March 2, 2013 at 2:57 pm said:
Neo v မှာသုံးလို့ ရမလား…မသိဘူး
Reply ↓	Phillip Mars on March 2, 2013 at 2:58 pm said:
Neo v မှာသုံးလို့ ရမလားမသိဘူး
Reply ↓	casper on March 2, 2013 at 4:30 pm said:
ကျွန်တော့်ဖုန်းက samsung scl model က I9003ပါ
Reply ↓	koungkoung on March 2, 2013 at 6:31 pm said:
အကိုရေ ကွန်ပျူတာမှာလည်း Install လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဖွင့်လိုက်ရင် www.srs.com ကိုရောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ ဖြေပေးပါအုန်း
Reply ↓	ကိုသက် on March 31, 2013 at 5:13 pm said:
Online ဖွင့်ထားပါ Update လုပ်ပေးသွားရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ
Reply ↓	aungthuhtet on March 4, 2013 at 5:27 pm said:
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဖုန်းကsony ericsson wt19i ဖြစ်ပါတယ် root လုပ်နည်းလေးရှိရင်လမ်းညွန်ပေးပါ
Reply ↓	မောင်ဂျပန် on March 8, 2013 at 8:45 am said:
TCL Y900 ကို root ချချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျေးဇူးပြု ပြီး ပြောပြပေးပါအုံး
Reply ↓	hlaingoo on March 14, 2013 at 8:55 am said:
Reply ↓	သိန်းစိုး on March 16, 2013 at 3:21 am said:
ဒီ web ကိုသဘောကျပါတယ်
Reply ↓	သိန်းစိုး on March 16, 2013 at 3:52 am said:
ဒီ web ကိုသဘောကျပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဖုန်းက c8812 ပါ။gtalk app နဲ့မကိုက်ပါဘူးခင်ဗျာ။
Reply ↓	သိန်းစိုး on March 21, 2013 at 8:42 am said:
ကျွန်တော် pc softwaere တစ်ခု လူများသုံးတာတွေ့ထားယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဆိုင်မှာ မှရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
phone application … A O softwaere လို့ပြောတာဘဲ။တရုတ်စာတွေနဲ့ pcာ်မှာတွေ့ရတာ။ကိုသက် ရှိရင် ကူညီပါ
Reply ↓	kyimoe on March 18, 2013 at 3:52 pm said:
Reply ↓	kaungkim on March 25, 2013 at 6:31 am said:
ကျတော့ ဖုန်းက samsung grand ပါ root လုပ်ထားပါတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာစာ ကြည့်ရင် စာလုံးတွေ အချို့ဖတ်လို့ အဆင်မ ပြေဘူး စာရိုက် ရင် လဲ space ခြားရိုက် နေရတယ် တဖက်က စာကို ပြန်ကြည့် တော့ စာလုံး တွေကို ဖတ်လို့ အဆင် မ ပြေဘူး zawgyi one နဲ့ frozen keyboard ထည့်ထားပါတယ် ဘယ်လို ပြန်ပြီးလုပ် ရမလဲ အကူအညီ ပေးပါအုန်း ဗျာ စာရိုက် website ကြည့်ရတာ အဆင် မ ပြေလို့ ပါ.
Reply ↓	min min on March 29, 2013 at 7:03 pm said:
Huawei U8812 ကို version မြှင့် နည်းလေး သိချင်ပါတယ်…သိသူများပြောပြပေးကြပါဗျာ… Thanks all.. Reply ↓	monthant on March 30, 2013 at 3:10 am said:
ကျတော့ဖုန်းက i.mobile i.style q4 ပါ။မြန်မာဖောင့်ထည့်မရသေးလို့ root လုပ်နည်းလေးသိရင် မျှဝေပေးပါအုံး
Reply ↓	bully on March 30, 2013 at 6:44 pm said:
ညီအစ်ကို တို့ ရေသိရင်လည်း ပြောပြပေးပါနော် အနော့် tablet acer iconia b1-a71 ကို မြန်မာfonts သွင်းချင်လို့ အဲ့ ဒါ ဘယ်လို ပြုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာ ကို ပြောပြပေးပါနော် ။။။ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိမှာပါ … .တကယ်ပါ
Reply ↓	Phyo Thwin Kyaw on April 3, 2013 at 4:50 am said:
acer iconia B1A71 tablet ရဲ့root လိုချင်လို့ ပါ။ ကူညီပေးပါအုံး။
Reply ↓	saingmoon on April 16, 2013 at 5:32 am said:
please help me ! My nokia N9 phone windows can not up
Reply ↓	Ju Ju on May 19, 2013 at 9:20 am said:
Reply ↓	Zom Seng Khae on May 19, 2013 at 3:51 pm said:
ကျတော့ဖုန်း Samsung Galaxy Tab 2(7.0) မြန်မာဖောင်ထည့်နည်းနဲ့ root လုပ်တဲ့နည်းသိချင်ပါတယ်ဗျာ..
Reply ↓	Zom Seng Khae on May 19, 2013 at 3:59 pm said:
Samsung Galaxy Tab 2(7.0) Model Y7-3l Android version 4.0.4 Baseband version 1.4rc3 ဖုန်းကို Root လုပ်နည်းနဲ့မြန်မာဖောင်ထည့်နည်းသိချင်ပါတယ် ကူညီပါအုန်း